Abavelisi beKimono -iThengi kunye nabaThengi baseChinono
IJapan isitayile esiphakathi Sleeve umnqamlezo Collar Kimono for Irestyu kunye nehotele CU1099Z161012H
Isatifikethi se-brand CHECKEDOUT OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1099Z161012H ubungakanani M-2XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jekete yokupheka, idyasi yokupheka, iyunifomu yoyilo, iyunifomu ye-kimono Fabric 60/40 poly / ikotoni GSM 145g ECO-friendly Xinjiang Aksu Umqhaphu omde omde, ongathathi ntweni, akukho shwabeneyo, akukho zibalo, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yompheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Ngubani ...
Isitayile saseJapan Medium Sleeve Cross Collar Kimono Kwindawo yokutyela nakwihotele CU1118Z123124AQ
Brand CHECKEDOUT Isiqinisekiso OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1118Z123124AQ ubukhulu M-3XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jekete yokupheka, yingubo yokupheka, iyunifomu yondwendwe, iyunifom ye-kimono I-100% yekotoni ye-ECO-friendly Xinjiang Aksu. akukho-pilisi, akukho-shinyayo, akukho zibalo, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, ...
Isitayile saseJapan Medium Sleeve Cross Collar Kimono Kwindawo yokutyela nakwihotele CU1118Z124123AR
Brand CHECKEDOUT Isiqinisekiso OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1118Z124123AR ubungakanani M-3XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jekete chef, umpheki wokupheka, iyunifomu yondwendwe, iyunifom ye-kimono Fabric 100% yekotoni ye-ECO-friendly Xinjiang Aksu. akukho-pilisi, akukho-shinyayo, akukho zibalo, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, ...
IJapan isitayile esiphakathi Sleeve umnqamlezo Collar Kimono for Irestyu kunye nehotele CU1119Z161012H
Brand CHECKEDOUT Isiqinisekiso OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1119Z161012H ubungakanani M-3XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jekete chef, umpheki wokupheka, iyunifom yondwendwe, iyunifom ye-kimono Fabric 100% yekotoni ye-ECO-friendly Xinjiang Aksu. akukho-pilisi, akukho-shinyayo, akukho zibalo, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi enganyangekiyo, ...
Umbala oMhlophe oPhakathi oMnqamlezileyo uMnqamlezo weCollar Kimono CU1117Z002000A
Brand CHECKEDOUT Isiqinisekiso OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1117Z002000A size M-2XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jombo chef, ingubo yokupheka, iyunifom yondwendwe, iyunifom ye-Kimono Fabric 65/35 iplash / ikotoni GSM.235g ECO-friendly Xinjiang I-Aksu yekotoni emide, engathathi-pilisi, enganciphisiyo, kungekho zi-carcinogen, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi ...
Isitayile saseJapan Medium Sleeve Cross Collar Kimono Kwindawo yokutyela nakwihotele CU1117Z130000A
Brand CHECKEDOUT Isiqinisekiso OEKO-TEX standard 100 Item Code CU1117Z130000A ubungakanani M-2XL Amagama aphambili chef, ingubo chef, jokeni chef, ingubo yokupheka, iyunifom yondwendwe, iyunifom ye-kimono Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g ECO-friendly Xinjiang I-Aksu yekotoni emide, engathathi-pilisi, enganciphisiyo, kungekho zi-carcinogen, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi ...